Tuesday March 12, 2019 - 19:13:38 in Wararka by Super Admin
War rasmi ah oo kasoo baxay taliska ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa lagu faah faahiyay dagaal culus oo xalay saqdii dhexe ka dhacay deegaan katirsan Sh/Hoose.
ciidamada shabaabul Mujaahidiin
Al Shabaab waxay xaqiijisay in dagaalkii xalay ka dhacay deegaanka Daaru Salaam ay ku dishay Sarkaal sare oo katirsan ciidanka Mareykanka ee duullaanka ku jooga dalka Soomaaliya islamarkaana ay dhaawacday 2 askari.
"Mujaahidiintu dagaal culus oo xalay ka dhacay deegaanka Daarusalaam ee wilaayada Islaamiga Shabeelaha Hoos waxay khasaara lixaad leh ku gaarsiiyeen ciidamada dowladda saliibiyadda Mareykanka, waxaan muslimiinta ugu bishaaraynaynaa in dagaalkii xalay lagu dilay sarkaal American ah oo ahaa taliyihii hoggaaminayay ciidamada weerarka soo qaaday halka ay dhaawacmeen 2 askari oo kale" ayaa lagu yiri warka kasoo baxay Al Shabaab.
Wararka ayaa intaas ku daraya in xoogaga Al Shabaab ay dagaalkii xalay ku dileen 6 kamid ah maleeshiyaadka Mareykanku tababaray ee Bangaraafta loo yaqaan sida lagu xaqiijiyay warka kasoo baxay Shabaabul Mujaahidiin.
Ilo wareedyo ayaa xaqiijinaya in ciidamada Al Shabaab ay gacanta ku dhigeen hubkii iyo qalabkii Melleteri ee uu watay sarkaalka Mareykanka ee lagu dilay dagaalka iyadoona ciidamada huwanta ah u suurtgashay in ay goobta dagaalka si dirqi ah uga qaataan Meydadkii iyo dhaawacyadii gaaray.